umoya system gqith solar ukuba ikhaya kunye nezorhwebo - Ningbo waseHaiti Holding Group Co., Ltd
ngumoya inkqubo ezisebenzisa elanga ekhaya kunye nezorhwebo
Ngokutsho iingcali eneji ehlaziyekayo ezininzi, i "hybrid" inkqubo yombane encinane oluhlanganisa umoya kwaye (photovoltaic) ubugcisa elanga inikeza okumbalwa phezu mhlawumbi system.In olunye kakhulu iindawo, ngezantya umoya ziphantsi ehlotyeni xa ilanga likhanya ankrelekrele elide. Umoya onamandla ebusika xa kwelanga ngaphantsi iyafumaneka. Ngenxa amaxesha yokusebenza eliyincopho umoya kunye neenkqubo elanga kwenzeka ngamaxesha ahlukeneyo emini kunye nonyaka, iinkqubo hybrid kunokwenzeka ngakumbi ukuba avelise amandla xa uyifuna.
1. PV Array: A Inani iiphaneli PV enxulumene kwi series kunye / okanye ngokunxuseneyo ngokunikeza DC imveliso ephuma irradiance yesehlo. NgezoBomi kunye nokujikeleza kwezi panels ezi parameters uyilo ebalulekileyo, kwakunye kukhuhlwe olusuka kwizithinteli ezingqongileyo.
2. injini Wind: Oku ifakiwe ngaphezulu inqaba ende, iqokelela amandla agciniweyo umoya iyiguqule anombane into edityaniswe kwindlela lombane ikhaya wakhe.
3. isilawuli Hybrid: ukulawula isigxina bank ibhetri nokuchithela sengqiqweni kunye nokhuseleko.
4. yebhanki Ibhetri: inokuba i ibhetri eyodwa okanye iibhetri ezininzi ezinxulumene kunye ukudala ungaphinda omnye Ibhetri enkulu umthamo wamandla ombane kunye amp iyure-ezifunekayo. Ngandlel 'ithile kuqwalaselo ibhetri kwaye umthamo zezona ngamandla ombane sigqibo sibalulekileyo ukwenza, kwaye ukhetho lobulumko kunokusinceda eqinisekisa unikezelo ngcembe kwamandla ombane kwakunye nenkqubo ilula ukusebenza nokulondoloza.
5. Inverter: A Converter amandla ° inverts ± amandla DC ukusuka panels ukuya AC ngamandla.
6. imithwalo: Imele i kwinethiwekhi iqhagamshele zombane ekwakheni ezidla ukusuka inverter (AC imithwalo), okanye ukusuka kwi ebhankini ibhetri (imithwalo DC).